စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာ - ဝီကီပီးဒီးယား
စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ် (Инженерные войска (ИВ) — စစ်မြေပြင်ဆိုင်ရာ ကင်းထောက်ခြင်း၊ တိုက်စစ်တွင် ရန်သူတပ်များအား တားဆီးခြင်း၊ မိမိ နယ်မြေအား ပတ်လည်ခံစစ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အထောက်အပံပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
လီယိုကီးလ် (နပိုလီယန်ခေတ် အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ ရုရှားအရာရှိများ)
ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင် အသုံးပြုသော အင်ဂျင်နီယာ လက်ရုံးတံဆိပ်
ထိုစစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မိုင်းရှာဖွေရေးတပ်၊ လမ်းတံတားဆောက်လုပ်ရေးတပ်နှင့် အခြားအင်ဂျင်နီယာတပ်များ ပါဝင်သည်။
ယခင် နိုင်ငံအများစုတွင် အင်ဂျင်နီယာတပ်များကို အင်ဂျင်နီယာတပ်တော်၊ ဘုရင့်အင်ဂျင်နီယာတပ်၊ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ၊ လမ်းတံတား အင်ဂျင်နီယာ အစရှိသဖြင့် သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာတပ်၏ မွေးနေ့ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည်။
ရှေးယခင် အေဒီ ၂ ရာစုခန့်တွင် အင်ဂျင်နီယာ (итал. ingegni, исп. engeños (သို့) ingenios) ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ—စစ်သုံးယန္တယားများကို မောင်းနှင်သူ (သို့) တီထွင်သူ၊ နောင်တွင် ပိုင်အိုနီယား (ရှေးဦးလုပ်သား) (ပြင်သစ်: pionier (အင်္ဂလိပ်: pioneer)—အဓိပ္ပာယ်မှာ pion—ခြေလျင် ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီး လက်တင်: pes, pedis— ခြေထောက်မှ ဆင်းသက်လာသည်—လမ်းပြင်၊ တံတားခင်း၊ ကတုတ်ကျင်းတူးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သော စစ်သား ဟု ဆိုလိုခဲ့ကြသည်။
၁ ရှေးယခင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
ရှေးယခင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများပြင်ဆင်
စစ်မှုရေးရာများတွင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အရေးပါလာသည်နှင့်ဆက်စပ်၍ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားသည့် အင်ဂျင်နီယာတပ်များ ဖွဲ့စည်း ခဲ့လာသည်။ ဂရိပြည်ဟောင်း၊ ရောမ၊ ကာသေ့ချ်ပြည် တို့၏ စစ်တပ်များတွင် အစပထမတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်များ၊ တပ်သားများ ခိုင်းစေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အထူးဖွဲ့စည်းထားသော တပ်စုများဖြင့် လည်းကောင်း အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ထိုတပ်စုများကို ရှေးဦးလုပ်သားတပ်စုဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုရှေးဦးတပ်သားများသည် စစ်မြေပြင်တွင် ရှေ့မှ ကနဦးသွား၍ လိုအပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းရှင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။ Assyria စစ်တပ်(ဘီစီ ၁၀ ရာစုခန့်က)တွင် မြို့များ၏ နံရံပေါ်တွင် ပြအိုး၊ပစ္စင် များတည်ဆောက်ခြင်း၊ တံတားများဆောက်ခြင်း၊ လမ်းများခင်းခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သော မြေတူးတပ်စု ဟူ၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးသော အချိန်များတွင် အားဆီးရီးယား လူမျိုးများသည် ဖောင် သို့မဟုတ် သားရေဖြင့် ချုပ်ထားသော လေမှုတ်အိတ်များ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ခြေလျင်၊ ခြေမြန်တပ်များ စစ်ချီထွက်စဉ် စခန်းချရပ်နားရန် ရွက်ဖျင်တဲများ၊ ခံစစ်ကျင်းများကို ကျွန်များ၏ အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
Никифоров Н. И. Штурмовые бригады Красной Армии в бою. — Эксмо Яуза, 2008. — 416 с. — (Великая Отечественная: Цена Победы). — ISBN 978-5-699-25628-0.
Инженерные и Железнодорожные войска: В2т. — СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1909—1911. на сайте Руниверс
Инженерные войска по 15 июля 1901 г. — СПб.: Тип. П. П. Сойкина— 48 с. на сайте Руниверс
войска Инженерные войска // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и4доп.). — СПб., 1890—1907.
Инженерные войска: История, штаты, техника, боеприпасы
Sapper Museum — Инженерные войска: Эмблемы, знаки, униформа, фото персональных памятников военным инженерам
Статья 310 лет ИВ России Памятники военно-инженерного искусства: историческая память и новые объекты культурного наследия России
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာ&oldid=701851" မှ ရယူရန်
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။